Nhau - Nhau dzakanaka nezvealuminium formwork
Iko kushandiswa kukuru kwehuni mukuvakwa kwemaguta kwakatungamira mukuparadzwa kwemasango kwakanyanya, kusvibiswa kwakanyanya kwemarara ekuvaka, uye kukuvadza kwakakomba nharaunda yezvakatipoteredza. Kuzivikanwa uye kushandiswa kwealuminium mold system kunoita kuti kuvaka kuvaka kuve nani, nekukurumidza uye nekuwedzera mari, zvinoenderana neakaderera-kabhoni emisi kudzikisira uye green green technology, uye iri hombe hunyanzvi mumunda wekuvaka kuvaka.
Isu takazvipira kusimudzira shanduko uye kusimudzira indasitiri yekuvaka uye nekupa mhinduro dzakasvibirira dzekuvakwa kwemaguta. R & D timu ine nyika inozivikanwa bhizinesi tekinoroji nzvimbo uye manejimendi manejimendi vanonakidzwa nezvakakosha zvipo kubva kuState Council, inonamatira kuR & D uye nehunyanzvi hwealuminium zvigadzirwa zvigadzirwa, uye zvine simba inosimudzira iyo yekudhonza-tebhu system. Iyo yekumba yekutanga aruminiyamu muforoma yakazara-yakavhomorwa jira system inoiswa kune yakakwira yepamusoro-simuka mapurojekiti, uye yakunda musika Zvakanyanya kuzivikanwa nevatengi.
Isu tinopa hunyanzvi hwekuvaka kwakadzika kwealuminium mafomu ekugadzira masevhisi ekuita kuti kuvaka kuve kwakanyatsoita uye kugadzira mhedzisiro zvirinani nefomu shoma. Yakagadzirwa zvinopfuura chiuru zvivakwa uye nekubudirira kugadzirisa akawanda maindasitiri matambudziko senge akakwirira-kukwirira, zvivakwa zveduplex, dzimba dzepasi, zvakagadzirirwa magungano zvivakwa, uye epasi pevhu mapaseji
Yakagadziriswa manejimendi, manejimendi manejimendi uye kutonga kwega kwega mashandiro ekuita, kuona kuti zvigadzirwa zvinounzwa ne zero kukanganisa.
Ipa marara aruminiyamu, marara mafomu ekutsiva mafomu substrate, akajairwa mapaneru.
Aluminium yekudzokorodza bhizinesi yapfuura ASI certification, aluminium marara base, inosimudzira iyo yakasvibirira uye yakagadzikana kuvandudza yealuminium indasitiri.
Parizvino, zvigadzirwa zvaro uye masevhisi anofukidza matunhu gumi nemana nemaguta munyika, uye anotumirwa kuSoutheast Asia, Africa nedzimwe nzvimbo dzekunze. Iyo yakurumidza kukura kuita yepasi rose yakanaka kwazvo kuvaka formwork tekinoroji kambani.
Zvino mune ino yakakosha nguva, iine Corona pesvedzero munyika dzese. Isu tinopa yakakosha mutengo kubatsira wekuvaka musika kupora. Gamuchira noushamwari kubvunza kwako.
Metal Cuplock Scaffolding, Heavy Duty Ringlock Scaffolding, Kwikstage Scaffolding Chishongedzo, Scaffolding Chinogadziriswa Screw Jack, Ringlock Scaffolding Zvikamu, Ringlock Scaffolding chikomboredzo,